Global Voices teny Malagasy » Nihantsy ny fampahalalam-baovao tsy miankina ny fampahalalam-baovaom-panjakana Rosiana noho ny fampiasana teny ‘tsy mitanila’ amin’ny tati-baovao momba ny ady amin’ny mpampihorohoro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Avrily 2019 5:42 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Kovalev Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Manamboninahitra Rosiana FSB nandritra ny hetsika tao Tyumen. Avy amin'ny nac.gov.ru ary nahazoana alalana araka ny nametrahana azy
Tamin'ny 13 Aprily 2019, nisy ny ady amin'ny mpampihorohoro natao tao an-tanàna Siberiana Tymen. Nihodidina trano iray tao an-tanàna ambanivohitra ny tafi-panafihana iray, namindra toerana ireo mponina ary nifampitifitra tamin'ny olona roa tao anatin'ilay trano, ka nahavoa azy roalahy ireo. Tsy nisy ny niharam-boina hafa na namoy ny ainy. Nanambara ny FSB, sampam-piarovana anatiny ao Rosia fa nahomby ny hetsika natao ary nilaza fa milisim-panjakana Islamika izy roa lahy ireo ary nanomana fanafihan'ny mpampihorohoro ao an-toerana.
Tsy nanome porofo fanampiny hanohanana ny filazany ny sampam-piarovana, saingy nitsikera ny haino aman-jery izy noho ny fandefasana mivantana ny hetsika. Nilaza tamin'ny Znak.com, fampahalalam-baovao ara-paritra ny loharanom-baovao ao amin'ny sampan-draharahan'ny fiarovana hoe:
Tsy faly tamin'ny haino aman-jery nandefa mivantana ny hetsika izahay. Tao amin'ny sekoly iray (izay nisy ny foiben'ny hetsika) no niandohan'izany talohan'ny nanombohan'ny fanafihana. Mety nahita ny fandefasana mivantana ireo mpampihorohoro, satria mahafantatra tsara ny media sosialy ny iray tamin'izy ireo, araka ny asehoan'ny pejiny.
Matetika ny fampahalalam-baovaon'ny fanjakana Rosiana mandray ireo filazana ireo ho zava-dehibe, miantso ireo olona maty amin'ny hetsika toy izany ho “mpampihorohoro” fa tsy manampy mpamaritra hoe “noahiahiana” na “lazaina fa mpampihorohoro” Tamin'ity indray mitoraka ity, anefa dia lasa lavitra ny tranonkala amin'ny teny rosiana RT ary nanafika ireo haino aman-jery hafa ho mampiasa teny tsy miandany toy ny hoe “maty novonoina”, fa tsy hoe “nofongorina” na “tsy navela hihetsika.”
Nofongorina ireo mpampihorohoro tao Tyumen, fa amin'ny filazan'ny Meduza sy Dozhd [tranonkalam-baovao sy fantsom-pahitalavitra mahaleo tena] indray dia “maty novonoina” izy ireo. Okay ary e!
Nandrehitra ny adihevitra momba ny fiteny “tsy maha-olombelona” tamin'ny tati-baovao momba ny fampihorohoroana ny siokan'ny RT. Niaro ny fanapahan-kevitry ny RT ireo mpomba ny fanjakana amin'ny fampiasana ny teny toy ny hoe “nofongorina” sy ny tsikerany tatỳ aoriana tamin'ny gazety izay tsy mampiasa izany. Andrey Medvedev, mpitati-baovao momba ny ady ao amin'ny fantsona Rossiya an'ny fanjakana, nanoratra tao amin'ny fantsona telegrama hoe:
Azo vonoina ny olona iray. Na koa biby mihitsy aza. Mpampijaly biby, ohatra, mamono alika. Fa ny mpampihorohoro izay mametraka ny tenany ivelan'ny lalàna dia azo fongorina. Na vonoina na Diovina. Satria ireo tonga ao an-tanànantsika mba hidaroka baomba amin'ny olona tsy manan-tsiny, ​​mba hamono (eto no mety amin'ity teny ity) azy ireo, mba hitondra fahafatesana, hitifitra sy hamafy fahoriana – dia mihoatra ny maha-olombelona izy ireo. Teraka tao amin'ny haizina izy ireo. Tokony hofongorina izy ireo. Toy ny toeran'ny aretina na andiana bakteria mahery vaika. Toy ny fivontosana misy homamiadana ary esoriana amin'ny alalan'ny taratra ny “metastazy”.
Nampitandrina ireo matihanina amin'ny fampitam-baovao hafa fa tsy tokony hampiasa ny fitenin'ny sampam-baovaom-panjakana ny mpanao gazety, na dia misy aza ny fandrahonana efa voamarina ny fisiany. Dmitry Kolezev, tonian-dahatsoratra lefitra ao amin'ny Znak.com, nanoratra  hoe:
Na dia matoky tanteraka ny sampam-piarovana, ny FSB sy ny NAK [Komity Nasionaly Miady amin'ny Mpampihorohoro] aza isika, dia tsy voatery haneho ny zava-misy amin'ny fiteny izay mety amin'izy ireo. Fandrahonana goavana ny fampihorohoroana, saingy tsy tokony hanaloka ny fijerintsika sy handray ho zava-dehibe izay rehetra lazain'ny fanambarana an-gazety ny fanomeza-marika “mpampihorohoro” asehon'ny FSB amin'ny fanambarana an-gazetiny. Satria amin'izao fotoana izao, ireo be volom-bava no “mpampihorohoro”, mpampihorohoro mandrangaranga baomba, ireo mahery fihetsika avy amin'ny karajia Telegram izany rahampitso, ary raha afaka ampitso ny mpikarakara hetsi-panoherana ary avy eo ianao. Zavatra mampidi-doza ny fanomeza-marika.
Mahatsikaiky fa mampiasa tanteraka ity karazana fiteny ity ny media sosialy manokana amin'ny teny Anglisin'ny RT, naneso ireo mpiara-miasa aminy Rosiana izy ireo:
Tsy zava-baovao velively ny adihevitra “novonoina vs. nofongorina”. Niverina tamin'ny taona 2013 i Oleg Kashing, mpanao gazety Rosiana malaza, nanoratra  tao amin'ny tranonkala tsy miankina Colta.ru hoe:
Indray andro any, hahazo fanambarana an-gazety avy amin'ny sampam-baovaom-panjakana amin'ny mailakany ny tonian-dahatsoratry ny tranokalam-baovao iray, midera mahery fo hafa an'ny sampam-piarovana. Hanaraka avy eo ny fanoratana vaovao haingana, manolo ny “nofongorina” amin'ny “maty novonoina” ary “mpampihorohoro” hosoloina “olona.” Hanampy mpamaritra “araka ny filazan'ny FSB” any amin'ny toerana sasantsasany izy ireo ary avy eo hametraka ny “tifitra” fa tsy “bemidina manokana” amin'ny lohateny. Tsy misy zavatra sarotra na manan-danja izany, saingy rehefa mitranga ny zavatra toy izao, dia hino aho fa tena niova tokoa ny firenentsika.
Tena hafa amin'ny lafiny maro i Rosia taona 2019 raha oharina tamin'i Rosia taona 2013, ary tsy voatery ho amin'ny fomba tsara. Saingy azo antoka fa ankasitrahan'i Oleg Kashin ny zava-misy fa maro ireo mpamoaka vaovao Rosiana no miala am-panahy iniana amin'ny fitenin'ny governemanta, fa manohana kokoa ny fiteny tsy mitanila rehefa miresaka lohahevitra saropady sy mampiadihevitra tahaka ny fampihorohoroana, araka ny asehoan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny media sosialy etsy ambony amin'ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/30/137471/
 milisim-panjakana Islamika : http://tass.com/emergencies/1053519
 Nilaza : https://www.znak.com/2019-04-13/znak_com_uznal_podrobnosti_operacii_po_neytralizacii_predpolagaemyh_terroristov_v_tyumeni
 13 апреля 2019 г.: https://twitter.com/RT_russian/status/1116953990892269568?ref_src=twsrc%5Etfw
 nanoratra : https://t.me/MedvedevVesti/582
 14 апреля 2019 г.: https://twitter.com/mynameisphilipp/status/1117453387262517250?ref_src=twsrc%5Etfw